musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose » Kanada Breaking News » Canada inorambidza dzese dzakananga dzevatyairi kubva kuMorocco
Airlines • nhandare yendege • avhiyesheni • Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Kuputsa Kufamba Nhau • Bhizinesi Kufamba • Kanada Breaking News • Hurumende Nhau • Health News • Marokero Kuputsa Nhau • nhau • Kuvakazve • Kutarisirwa • chengetedzo • ushanyi • kutakura • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo • Kufamba Wire Nhau • Trending Now • Akasiyana Nhau
Zvichienderana nezano razvino rehutano reruzhinji kubva kuPublic Health Agency yeCanada, Transport Canada iri kuburitsa ziviso kuAirmen ichimisa kwese kwendege nendege dzevatengesi dzakananga kuCanada kubva kuMorocco kubva munaAugust 29, 2021 kusvika Nyamavhuvhu 29, 2021.
Kutakura Canada inodzora dzese dzekutengesa uye dzakavanzika dzevatyairi kuenda kuCanada kubva kuMorocco.
Kurambidzwa kwendege kuMorocco kuri kutanga kubva Nyamavhuvhu 29 kusvika Nyamavhuvhu 29.
VaCanada vanokurudzirwa kuti vadzivise chero rwendo rwusina kukosha kunze kweCanada
Canada ine dzimwe nzira dzakanyanya kuomarara dzekufamba nemuganhu munyika, uye iri kukoshesa hutano nekuchengetedzeka kwevaCanada nekuenderera mberi nekutora nzira ine njodzi uye yakayerwa yekuvhurazve miganhu yayo.
Kufanana nechimwe nechimwe chinhu chekupindura kweCanada COVID-19, zviyero zvemuganho zvinoenderana nedata riripo, humbowo hwesainzi uye kuongorora kwehutachiona mamiriro muCanada nepasirese. Kuwedzera kweCOVID-19 mhedzisiro bvunzo yakaonekwa kune vafambi vanosvika muCanada kubva kuMorocco pamwedzi wapfuura.
Kubva pane ichangoburwa yeveruzhinji hutano kuraira kubva kuPublic Health Agency yeCanada, Kutakura Canada ari kuburitsa ziviso kuAirmen (NOTAM) inodzora dzese dzekutengesa uye dzevamwe vatyairi vanoenda kuCanada kubva Moroko kubva Nyamavhuvhu 29, 2021, na00: 01 EDT kusvika Nyamavhuvhu 29, 2021, na00: 00 EDT. Ndege dzese dzakananga dzekutengesa uye dzakavanzika dzevapfuuri vanoenda kuCanada kubva kuMorocco vanozviisa pasi peNOTAM. Cargo-chete mashandiro, ekurapa anochinjisa kana ehondo ndege haabatanidzwe.
Kuona kuchengetedzeka kwendege uye kudzikisira kukanganisa kwekushanda, ndege dzinobva kuMorocco idzo dzatove dzichifamba panguva yekuburitswa kwe NOTAM ichabvumidzwa kuenda kuCanada. Sechiyero chenguva pfupi, kudzamara NOTAM yatanga kushanda, vafambi vese vanosvika panendege idzodzo vanofanirwa kutora bvunzo pakusvika kuCanada.
Kutakura Canada kuri kugadzirisawo iyo Yechinguva Kodhi Kuremekedza Zvimwe Zvinodikanwa zveVanhu Aviation Nekuda kwe COVID-19, inoenderana neyechitatu-nyika pre-kuenda COVID-19 mamorekuru bvunzo kusanganisa vafambi kuenda kuCanada kubva kuMorocco nenzira isina kunangana. Izvi zvinoreva kuti vafambi vanoenda kuMorocco kuenda kuCanada, vachishandisa nzira isina kunanga, vachazodiwa kuti vatore bvunzo yeECVID-19 isati yasimuka kubva kune yechitatu nyika - kunze kweMorocco - vasati vaenderera mberi nerwendo kuenda kuCanada. Iyo yechitatu-nyika yekuedzwa inodikanwa ichauya zvakare kushanda muna Nyamavhuvhu 29, 2021, na00: 01 EDT.
Canada iri kuenderera mberi nekuongorora mamiriro ezvinhu, uye ichange ichishanda pamwe neHurumende yeMorocco nevashandisi venendege kuona kuti nzira dzakakodzera dzaiswa kuitira kuti kumisikidza nendege kwakanangana nekukurumidza kana mamiriro ezvinhu abvumidza.
Kudzivisa nendege kubva kunyika dzekunetseka chimwe chikamu cheCanada nzira yakajairika kune manejimendi uye anoshanda manejimendi yeCanada yekuvhurazve chirongwa.
VaCanada vanokurudzirwa kuti vadzivise kufamba kusiri-kwakakosha kunze kweCanada - kufamba kwenyika dzese kunowedzera mukana wekuratidzwa, uye nekupararira kwe, COVID-19 nemimwe misiyano. Border matanho anoramba aripo achichinja sezvo mamiriro eepidemiological anochinja.